Ogaden News Agency (ONA) – Caasimada Wadanka Norway ee Oslo oo Shir Ay Kuyeelatay Jaaliyada S.Ogadenya ee Wadankaas Ku Dhaqan.
Caasimada Wadanka Norway ee Oslo oo Shir Ay Kuyeelatay Jaaliyada S.Ogadenya ee Wadankaas Ku Dhaqan.
Posted by ONA Admin	/ July 26, 2015
Shalay ooy taariikhdu ahayd 25.07.2015 ayaa waxaa shir muhiim ah isugu yimid Jaaliyada Soomalida Ogadeniya ee wadanka Norway, shirkan oo ahaa shir ay xubnaha jaaliyadu bishiiba mar isugu yimadan. Kulankan oo ahaa mid ahmiyad gaar ah u leh Jaaliayada Somalida Ogadeniya iyo xubnaha sharafta leh, waxaa si qoto dheer loogu qadaa dhigay kulanka balaadhan eey jaaliyadu marti galin doonto hadii alle idmo bisha August ee inagu soo aadan (Shirwaynaha Jaaliyadaha Soomaalida Ogadeniya) oo Ka dhici doona Oslo 14-16 august 2015.
Ugu horayn shirka waxaa lagu furay aayaddo quraan kariimka ah oo uu akhriyay SHEEKH CABDIRAXMAAN. Gudoomiyaha jaaliyada Soomaalida Ogadeniya Mudane: Khalif Abdi Ali ayaa si qoto dheer uga warbixiyay waxqabadka jaaliyada soomaalida ogadeniya iyo bulshada somalida ogadeniya ee Norway. Gudoomiyuhu wuxuu ka warbixiyay halka uu marayo marti galinta shirwaynaha jaaliyada soomaalida ogadeniya oo sanadkan ay marti-galinayso. Wuxuuna carabaabay inuu meel fiican marayo qorshihii loo dajiyay habsami usocodka shirka.
Kadib waxaa microfoonka lagu soo dhaweeyay Hogaanka Abaabulka Jaaliyada Somalida Ogadeniya Norway . Mudane: Cabdishakur wuxuu si waafi ah xubnihii shirka soo xaadiray uga war bixiyay wacyiga bulshada iyo sida ay marwalba ugu taganyihiin garab istaaga Qadiyada Somaalida Ogadeniya ee xaqa ah wuxuna sheegay in marba marka ka danbaysa ay bulshadu fahmayso tabaha guracan ee gumaysigu adeegsado iyo borobagandhada raqiiska ah. Abaabulka bulshadeena wuxuu marayaa heer-sare meel kastana waan kaga saraynaa cadawga ayuu yidhi mudana Abdishakur.
Bulshada Somaalida Ogadeniya ee Norway si wayn ayeey uga qayb-qadan doontaa marti galinta shirka sanadlaha ah ee Jaaliyaadka Somalida Ogadeniya waana u diyaar garawnay.
Waxaa kaloo madasha shirka fadhiyay oo war bixin dhaxal-gal ah xubnihii siiyay XILDHIBAAN MAXAMED YUSUF OO KAMID MASUULIYINTA JWXO. Wuxuu ka warbixiyay halka uu marayo halganka ay JWXO hormuudka katahay iyo xaaladaha halkan ku xeeran. Waxaa kaloo uu dul-joogsaday doorka laga rabo Jaaliyaadka iyo garab istagooda qadiyada xaqa ah ee Ogadeniya. Waxaa kaloo shirka goob-joog ka ahaa AGAASIMAHA GUUD EE ARIMAHA URURKA (AGAU) MUDANE: ABDINUR DHAGACADE-maalmahan ku sugnaa Oslo si uu ugu sii kuur galo u diyaar-garawga martigalinta shirka Jaaliyaadka Somalida Ogadeniya.
Wuxuuna agaasimuhu la wadaagay xubnihii shirka ka qayb-galayay war bixino khuseeya ururka iyo agendayaasha ururka u dajisan. Wuxuu kaloo talooyin lawadaagay jaalida marti galin doonta shirka dhici doona bisha danbde hadii alle idmo august 14-16 2015 Oslo, Norway. Talooyin dhaxal-gal ayaa la is waydaarsaday oo loo arkay inay kor u qaadayaan horumarinta jaaliyaadka iyo qadiyada markii laga eegay dhinacyo badan.
Waxaa kaloo shirkan ka qayb-galay MUDANE XUSEEN NUUR oo ah Madaxa Hogaanka Arimaha Ururka isagoo khadka telefanka si toos ah ugu jiray intuu shirku socday- isagoo ka warbixiyay shaqada loo idmaday inuu ummada u qabto iyo ahmiyada ay u leedahay ururka- jaaliyaduna waxay u dardaran tahay inuu ilahay shaqada iyo hawsha culus ee loo magacabay u fududeeyo. MUDANE XUSEEN NUUR wuxuu u dardarmay jaaliyaadka dhaman ineey hawshooda sii laban laaban iyo in gacmaha la is qabsado si cadawga lootirtiro…
Gaba-gabadii waxaa shirka lagu soo xidhay go`aamo la isla gaadhay: Jaaliyada soomalida Ogadeniya Ee Norway waxay muujisay sida ay uga go’an tahay marti galinta shirka iyo soo dhawaynta martida imaan doonta iyadoo ilaa hada soo dhamaystirtay dhaman waxyabihii lagama maarmaarka u ahaa inuu qabsoomo shirku.
Warfaafinta Jaaliyada S.ogadeniya